YEYINTNGE(ကနဒေါ): Tuesday, August 11
ပယောဂ အစစ်ပေါ့။ ဦးခင်မောင်အေး ဆိုတာက ဗိုလ်သင်တန်း အပတ်စဉ် (၈) က ဆင်းခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်အေး။ စာရေးဆရာ ခင်မောင်အေး (မန္တလေး) အမည်နဲ့ တောလိုက်မုဆိုးဝတ္တုတွေရေးတဲ့သူ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂ဝ) ကျော်ကာလ က (မဆလခေတ်ကောင်းစားစဉ်ကာလ၊ ဦးနေဝင်း တန်ခိုးထွားစဉ်ကာလက) ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်အေး နှင့် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်သောင်း (ယခု သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီး) တို့ အရပ်ဖက် အပို့ခံရတာ ကိုကောင်းကောင်းကြီး ကို မှတ်မိနေတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်အေး ကို သတင်း နှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း ကော်ပိုရေးရှင်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်သောင်း ကို ဘူမိဗေဒလေ့လာရေး နှင့် ဓါတ်သတ္တုရှာဖွေရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်တဲ့ နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း သတင်းစာတွေမှာ ပါလာတာကို ယခုအထိ ကောင်းကောင်းကြီးကို မှတ်မိသေးတော့တယ်။
ဗမကခင်မောင်အေး က ၈၈အရေးအခင်း တုန်းက သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်း ကဝန်ထမ်းတွေကိုဆန္ဒပြခွင့်ပေးလို့အရေးအခင်းလဲပြီးရော force to retire ဖြစ်သွားတယ်
ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအေးမြင့် ရေးတဲ့ဆောင်းပါး တွေကို ဖတ်ကြည့်တော့မှ ဇတ်ရည်လည်သွားတယ်။ ဦးသောင်း DSAအပတ်စဉ် (၁) က ဆင်းတော့ best cadet ဒါကြောင့် ထိုစဉ်က ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီး ရဲ့ PSOသွားဖြစ်တယ်။ ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီး ပြုတ်တော့ ဦးသောင်း လည်း မြောင်းထဲရောက်သွားတာပေါ့။ တိုတိုပြောရရင် ... ဒီလို။ ဦးသောင်း ခြေမြန်တပ်ရင်း (၁ဝ၂) မှာ တပ်ရင်းမှူး ဖြစ်စဉ်က တပ်မ (၇၇) တပ်မမှူး က ဗိုလ်မှူးကြီးဝမ်းတင် (ကွယ်လွန်)၊ ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်အေး က ဒုတပ်မမှူး။ ဦးသောင်း က စစ်ဦးစီး တက္ကသိုလ် တက်ချင်တယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီးဝမ်းတင် က သူ့ တပည့်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးသာစိန် (၁၉၈၈ တုန်းက သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီဥက္က ဌ) ကိုသာလျင် စစ်ဦးစီး တက္ကသိုလ် သို့လွှတ်ချင်တာ။ ဦးသောင်း က ဒုတပ်မမှူး ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်အေး ကို အကူအညီတောင်းတော့ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်အေး က ထောက်ခံစာ ရေးသားတင်ပြခဲ့တယ်တဲ့။ အဲဒီမှာတင် တပ်မမှူး ယမ်းပုံမီးကျ ဖြစ်ပြီး အထက်ကို တိုင်တော နဲ့ နောက်ဆုံး ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်အေး ရော ဦးသောင်း ရော အရပ်ဖက် ကို ရောက်သွားကြတာတဲ့။
(၁) ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်အေး ဟာ ဦးသောင်း ရဲ့ ဆရာ၊ ကျေးဇူးရှင်။ သူ့ကြောင့်ဘဓရ ညွှန်ချုပ် ဖြစ်လာရတာ။ ယခုတော့(မဟာ နယူကလီယာ စီမံကိန်း) ပိုင်ရှင် ဦးသောင်း ဖြစ်လာပြီ။
(၂) ဒေါ်အောင်းဆန်းစုကြည် ကို နည်းအမျိုးစုံနဲ့ မကောင်းရှာနေတာ ... အိမ်အမွေကိစ္စဖြစ်လာတော့ ချုပ်ချုပ်ကြီး ရဲ့ ညာလက်ရုံး ဦးသောင်း ပယောဂ ပါမယ်လို့ ထင်တယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး အကျယ်ချုပ်ချခံထားရတဲ့ အချိန်မှာ မှ ဘာဖြစ်လို့ ဒီ အမှုဖြစ်ရသလဲ။ ဆိုလိုတာက ဒေါ်ခင်ကြည် မကွယ်လွန်မှီ ဒေါ်ခင်ကြည် ၏ ဆန္ဒအလျောက် ပေးကမ်းခဲ့ရင် အစောကြီးပြီးတဲ့ ကိစ္စပါ။ ယခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ် အကျခံရမှ ဒီ အမွေအမှုပေါ်ပေါက်လာရတာကတော့ မရိုးသားဖူးပေါ့။
BY YeYint Nge ... 8/11/20090comment
get file http://sharebee.com/af55d72d
11.8.09 ဦးဥာဏ်ဝင်း (NLD )ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုအခြေအနေကို ရှင်းလင်းပြောပြချက်များ (video)
အီရတ်အာဏာရှင်အစိုးရကို အမေရိကန်တပ်က ၂၀၀၃ ခုမှာ ၀င်တိုက်ပြီး ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့အတွက် စစ်တိုက်ပြီး ဖြုတ်ချတဲ့ နည်းကို လက်ခံသူတွေရှိလာတယ်။ အတိုက်အခံ အားကောင်းလာအောင် ကူညီအားပေးတဲ့အတွက် အာဏာရှင်စနစ် နိဂုံးချုပ်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုကို နိုင်ငံခြားက စစ်ကူပေးပြီး အစိုးရကို ဖြုတ်တာမျိုး လည်းရှိတယ်။ လိုအပ်တဲ့ စီးပွားရေးအခြေခံတွေ မရနိုင်အောင် ပိတ်ပင်နိုင်တဲ့တွက် အာဏာရှင်တွေ ဆင်းပေးရတာမျိုးလည်း ရှိတယ်။
တောင်အမေရိကတိုက်က အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ နိုင်ငံရေးအင်အားရော၊ စစ်အင်အားရောရှိတာကြောင့် နိုင်ငံခြားက စစ်ကူယူတဲ့ အစဉ်အလာရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းမှာ စစ်အင်အားမရှိဘူး။ တိုင်းရင်းသားမှာသာ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရစစ်တပ်အင်အားဟာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားထက် ဆယ်ဆလောက်ပိုများတာရယ်၊ အင်အားကောင်းတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားတာရယ်ကြောင့် ဗမာစစ်အစိုးရကို ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်တွေက ဖြုတ်ချဖို့ဆိုတာ အလားအလာမရှိသလောက်ဘဲ။
အမေရိကန်နိုင်ငံရေးပညာရှင်အချို့ရဲ့ လေ့လာချက်တွေမှာ နိုင်ငံတွင်းက စစ်အင်အားအခြေအနေ ပြောင်းလဲသွားလို့ အာဏာရှင်စနစ် နိဂုံးချုပ်သွားပုံတွေကို ဖော်ပြတယ်။ အရှေ့ဥရောပ ဆိုဗီယက်တပ်တွေ ရုပ်သိမ်းလိုက်လို့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းနိုင်တာကို ဥပမာပေးကြတယ်။ ဆိုဗီယက်သြဇာခံနိုင်ငံတွေမှာ ဆိုဗီယက်လမ်းစဉ်ပြောင်းတာဟာ အမေရိကန် အကူအညီပေးတာထက်ပိုပြီး ထိရောက်တယ်လို့ Samual Huntington က တတိယလှိုင်း The Third Wave စာအုပ်မှာ ရေးဖူးတယ်။ ဆိုဗီယက်မှာ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရတာဟာ အာဖဂန်စစ်ပွဲမှာ အခြေခံတယ်လို့ Huntington က သုံးသပ်တယ်။ စရိတ်အကုန်အကျများလွန်းတဲ့ အာဖဂန်စစ်ပွဲကနေ ဆိုဗီယက်တပ်တွေ ဆုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့ အကျိုးဆက်ဟာ ပြည်တွင်းမှာ ရိုက်ခတ်သွားတာပါပဲ။
လောလောဆယ်တော့ မြန်မာပြည်ထဲ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီး စစ်ဘီလူးကို ဖြုတ်ချမယ့်သူ မရှိသေးဘူး။ ဗမာစစ်တပ် အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းပြီး သိမ်ငယ်သွားအောင် တိုက်ခိုက်နိုင်တာ တရုတ်တဦးတည်းရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် မော်စီတုန်း လက်ထက်ကလို တရုတ်တပ်တွေ မြန်မာပြည်ထဲဝင်တိုက်တာမျိုး လက်ရှိတရုတ်အစိုးရက လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ တရုတ်ပြည် အေးချမ်းစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာပြည်က အထောက်အကူ ပြုတာကိုပဲ တရုတ်ကွန်မြူနစ်က လိုလားတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့ ဗမာစစ်တပ်ဟာ တိုက်ရည်ခိုက်ရည် ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ခန့်မှန်းကြတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ကို မနိုင်ဘူးထင်လို့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားတာကို ထောက်ပြကြတယ်။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲမှု နိဂုံးချုပ်ပြီဆိုရင်တော့ မုဒိမ်းတပ်မတော်ရဲ့ အစွမ်းအစကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအာဏာရူးပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာလာတဲ့ ဗမာစစ်မှုထမ်းဟာ စစ်သည်တော် မစစ်တော့ဘူးလို့ သုံးသပ်သူလည်း ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်ပြီး ဖောက်ပြန်တဲ့ စစ်တပ်ဟာ အင်အားကောင်းတဲ့ရန်သူကို ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ အကွဲအပြဲဖြစ်ပြီး အာဏာလက်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ သာဓကတွေရှိတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ၁၉၈၆ က အာဏာရှင်မားကို့စ် ပြုတ်ကျသွားတာကို ပြည်သူ့ဆန္ဒပြပွဲကြောင့်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ပြည်သူ့အာဏာ တော်လှန်ရေးလို့ ကင်ပွန်းတပ်ကြတယ်။ မားကို့စ်အစိုးရရဲ့ ဖောက်ပြန်မှုတွေကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်မှာပါ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Fidal Ramos ဒီမိုကရေစီဘက်သားဖြစ်လာတာကို မေ့ထားလို့မဖြစ်ဘူး။ အာဏာရှင်မားကို့စ် လက်ထက်မှာ စစ်တပ်က နိုင်ငံရေးမလုပ်ပေမယ့် အာဏာရှင်နဲ့ ရောထွေးယှက်တင်ဖြစ်ပြီး ဖောက်ပြန်နေတာကြောင့် ပြည်တွင်းပုန်ကန်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စစ်ဗိုလ်လူတန်းစားထဲမှာ အမိန့်နာခံသူတွေ နည်းလာတယ်။
မတရားတဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို လက်မခံနိုင်တော့လို့ ပြည်သူနဲ့လက်တွဲပြီး ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ရေးလုပ်ချင်တဲ့ မျိုးဆက်သစ် စစ်ဗိုလ်လူတန်းစား ပေါ်ထွက်လာမှသာ မြန်မာပြည်မှာ အခြေခံအပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ အလားအလာရှိတယ်လို့ သုံးသပ်တာ မျိုးလည်း ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်တပ်ထဲ အကွဲအပြဲဖြစ်မှာ စိုးရိမ်သူတွေရှိတယ်။ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ကြပ်ပြေးသန်းရွှေ မိသားစုကို အလေးပြုတာပဲ မြင်ချင်သူတွေရှိတယ်။ အကြောင်းပြချက်က ဆိုမာလီနိုင်ငံ (Somalia) မှာလို လက်နက်ကိုင်ကြီးစိုးတဲ့ တပ်မင်းတွေ ပေါ်လာမှာစိုးရိမ်လို့တဲ့။ စစ်မရောက်မီ မြားကုန်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့။
ဗိုလ်ခင်ညွန့်ခေါင်းဆောင်တဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအုပ်စုကို ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေအဖြစ် သတ်မှတ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရတုန်း စာနာထောက်ထားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေရှိတယ်။ ဒေါ်စုနဲ့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ပြီး သမိုင်းစာမျက်နှာသစ် ဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ထောက်လှမ်းရေးတွေ ထောင်ထဲရောက်ကုန်တာကို ကြည့်ပြီး ဒေါ်စုနဲ့ ဆွေးနွေးချင်တဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်အုပ်စုနဲ့ မဆွေးနွေးချင်တဲ့ သန်းရွှေ-မောင်အေးအုပ်စု ပြိုင်ဆိုင်ရင်း ဗိုလ်ခင်ညွန့် အုပ်စု ပြုတ်သွားတာဆိုတဲ့ အယူအဆ အားကောင်းလာတယ်။
သတင်းစာဆရာ Bertil Lintner ကတော့ ဒီအမြင်ကို လက်မခံဘူး။ ခင်ညွန့်ထောက်လှမ်းရေးတွေ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး အင်အားကောင်းလာပြီး တပ်ထဲမှာ အခွင့်ထူးခံ ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ဗိုလ်သန်းရွှေက ရှင်းပစ်တာလို့ ဆိုတယ်။ ဗိုလ်နေ၀င်းက ထောက်လှမ်းရေးတင်ဦးကို ရှင်းပစ်တဲ့ပုံစံပဲလို့ဆိုတယ်။ ၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကာလမှာ ခင်ညွန့်ထောက်လှမ်းရေး သောင်းကျန်းတာတွေကိုကြည့်ပြီး ဒီလိုလူမိုက်တွေက ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကို မယုံမကြည် ဖြစ်နေတာပါပဲ။ သင်္ကန်းဝတ်လိုက်တဲ့ မုဒိမ်းသမား ဂျပိုးသူခိုးကို ၀ိုင်းရှိခိုးတဲ့ဓလေ့ မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတာကိုလည်း မေ့ထားလို့မဖြစ်ဘူး။
အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အနစ်နာခံလုပ်ကိုင်သွားကြတဲ့ မျိုးဆက်တွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ မျှော်လင့်ချက်ထားနိုင်တာ ၈၈ မျိုးဆက်ပဲလို့ Bertil Lintner သုံးသပ်တယ်။ ၈၈ မျိုးဆက်အများအပြား စာနယ်ဇင်းလောကမှာ တိုင်းပြည်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေကြတယ်။ မြန်မာ့အနာဂတ်မှာ အင်အားစုတစုအနေနဲ့ ပါဝင်မယ့်လူတွေဟာ ၈၈ မျိုးဆက်ဖြစ် တယ်။ သက်ကြီးရွယ်အို အန်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေမဟုတ်ဘူး။ ၈၈ မျိုးဆက်ထဲက ခေါင်းဆောင်အချို့ကို ထိန်းသိမ်းလိုက်ရုံနဲ့ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှု ကွယ်ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ စစ်အစိုးရဟာ နိုင်ငံရေးပါတီကို ဖျက်ဆီးနိုင်ပေမယ့် မျိုးဆက်တဆက်ကို ဖျက်ဆီးဖို့ အလွန်ခက်ခဲတယ်လို့ Bertil Lintner သုံးသပ်တယ်။
မျိုးဆက်တဆက်ကို အနှစ် (အစိတ်) လို့ သတ်မှတ်တာမို့ အာဏာရှင်စနစ် နိဂုံးချုပ်ဖို့ မျိုးဆက် ဘယ်နှဆက်ကြာမယ်မသိဘူး။ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဇာတ်သိမ်းစေတဲ့ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး ၁၇၈၉ မှာ စခဲ့ပေမယ့် နောက်အနှစ် (၈၀) ကျော်ကြာတော့မှ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေချည်း အစိုးရဖွဲ့နိုင်တာကိုကြည့်ရင် အာဏာရှင်စနစ်အမြစ်ပြတ်ဖို့ အချိန်ကြာတတ်တာကို တွေ့နိုင်တယ်။ လွတ်လပ်ရေးအတွက် အနစ်နာခံရတဲ့ အတိုင်းအတာဟာ တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံ မတူကြဘူး။ ဒါပေမယ့် လွတ်လပ်ရေးရအောင် ကြိုးပမ်းနေသမျှ အာဏာရှင်စနစ် နိဂုံးချုပ်မယ့် အခွင့်အလမ်း အမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေ။
the expected verdict is the military government's way of keeping the opposition leader out of general elections next year.
Statement on DASSK's Trial August 11 2009
Please come for demonstration in front of U.N., New York
UN Security Council to Take Action
Today (11 August 2009) Tuesday
At United Nations, Ralph Bunche Park,
43rd Street and 1st Ave., New York, NY
Burma Military regime ordered 1991 Nobel Peace Laureate Daw Aung San Suu Kyi to serve an 18-month sentence under house arrest on August 11, 2009 without listening to the U.N. chief Ban Ki-moon request to release her.
The current situation in Burma, security forces of the ruling State Peace and Development Council (SPDC) in Burma are still violations human rights against Burmese citizens, including National Leader Daw Aung San Suu Kyi.
Burma is one of the most tightly controlled dictatorships in the world and SPDC repeatedly ignored U.N. General Assembly and international community’s call to release Daw Aung San Suu Kyi, all political prisoner and to begin substantive dialogue with the democratic opposition.
The Security Council is the only body within the United Nations system that has the power to enforce its resolutions, either through sanctions of some kind (from complete economic sanctions to an arms embargo) or intervention.
It is time for the UN Security Council to take action.
World Action today
The following isatranscript of comments made by Secretary Clinton regarding Aung San Suu Kyi atapress availability with DRC Foreign Minister Alexis Thambwe this afternoon:
"With respect to Aung San Suu Kyi, she should not have been tried and she should not have been convicted. We continue to call for her release from continuing house arrest. We also call for the release of more than 2,000 political prisoners, including the American John Yettaw. We are concerned about the harsh sentence imposed upon him especially in light of his medical condition. The Burmese junta should immediately end its repression of so many in this country startadialogue with the oppositions and the ethnic groups. Otherwise the elections they have scheduled for next year will have absolutely no legitimacy."
MFA Spokesman's Comments on the Verdict of Daw Aung San Suu Kyi's Trial, 11 August 2009
"We are disappointed to learn that Daw Aung San Suu Kyi was found guilty and sentenced to three years hard labour. Daw Aung San Suu Kyi did not plan to violate the terms of her house arrest, and the intrusion into her house was byaperson who appears to be of unsound mind.
We are heartened that Minister of Home Affairs Major General Maung Oo had announced that Daw Aung San Suu Kyi will be allowed to see doctors and nurses, communicate with her party, watch local television channels, read local newspapers and journals, and can receive visitors with the government's permission and that there isapossibility that she could receive amnesty for the remainder of her sentence.
These are significant gestures by the Myanmar Government. We hope that the Myanmar Government will allow Daw Aung San Suu Kyi to participate in the political process as soon as possible. A meaningful dialogue between the Myanmar Government, Daw Aung San Suu Kyi and all other political groups in an open and inclusive process of national reconciliation is the only hope for the long term political stability of the country."
Aung San Suu Kyi sentenced to further 18 months house arrest (10/08/2009)
Prime Minister Gordon Brown has expressed sadness and anger at the outcome of the trial of Aung San Suu Kyi and has referred to the trial asasham. He has also called for further international sanctions against the Burmese regime.
"I am both saddened and angry at the verdict today, 11 August , following the sham trial of Aung San Suu Kyi.
The news - that she has been found guilty and sentenced to three years hard labour but that this has been “mitigated” toasuspended sentence of 1.5 years under house arrest - is further proof that the military regime in Burma is determined to act with total disregard for accepted standards of the rule of law and in defiance of international opinion.
This isapurely political sentence designed to prevent her from taking part in the regime’s planned elections next year. So long as Aung San Suu Kyi and all those political opponents imprisoned in Burma remain in detention and are prevented from playing their full part in the political process, the planned elections in 2010 will have no credibility or legitimacy.
The façade of her prosecution is made more monstrous because its real objective is to sever her bond with the people for whom she isabeacon of hope and resistance.
I have always made clear that the United Kingdom would respond positively to any signs of progress on democratic reform in Burma. But with the generals explicitly rejecting that course today, the international community must take action.
The EU has agreed to impose tough new sanctions targeting the economic interests of the regime.
I also believe that the UN Security Council - whose will has been flouted - must also now respond resolutely and imposeaworld wide ban on the sale of arms to the regime.
My thoughts today are with Aung San Suu Kyi - the human face of Burma’s tragedy - and with the people of Burma who suffer onadaily basis."
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the verdict against Daw Aung San Suu Kyi
The European Union condemns the verdict against Daw Aung San Suu Kyi, leader of the National League for Democracy and Nobel Peace Prize Laureate, and the unjustified trial against her. The proceedings against Daw Aung San Suu Kyi, on charges which were brought twenty years after she was first wrongfully arrested, have been in breach of national and international law. The EU urges the authorities to immediately and unconditionally release her.
The authorities of Burma/Myanmar have chosen to ignore the protests over her arrest and the appeals for her release. These have come fromalarger number of States and organisations than ever before, led by the UN Secretary-General, and including the Chair and several Member States of ASEAN, of which Burma/Myanmar isamember.
The EU will respond with additional targeted measures against those responsible for the verdict. In addition, the EU will further reinforce its restrictive measures targeting the regime of Burma/Myanmar, including its economic interests. The EU underlines its readiness to revise, amend or reinforce its measures in light of the developments in Burma/Myanmar.
The EU will intensify its work with the international community, and especially with its partners in Asia, to achieve our common aim of obtaining the immediate and unconditional release of Daw Aung San Suu Kyi and all other political prisoners in Burma/Myanmar. This is an essential first step in the process of genuine national reconciliation that is needed if the elections in 2010 are to be seen as credible, free and fair, as was also stressed by the UN Secretary-General during his mission to Burma/Myanmar on 3-4 July. The EU urges the authorities of Burma/Myanmar to comply with the Secretary General's demands and to cooperate with the UN and the international community. If the authorities decide to take such steps, the EU stands ready to respond positively.
The EU recalls its strong and unwavering commitment to support and sustain the people of Burma/Myanmar. The EU provides the people with substantial humanitarian assistance and stands ready to increase its support further.
media release of Australia Foreign Minister
DFAT Media Release 2009 August 11 DASSKs Sentence
Statement of Foreign Affairs Secretary Alberto G. Romulo on the Verdict on Aung San Suu Kyi
August 11, 2009 by DFA-PISU
PR-614-09, The Philippine Government finds the decision byacourt in Myanmar imposing on Daw Aung San Suu Kyi an 18-month sentence under house arrest as incomprehensible and deplorable. The Philippines urges the Government of Myanmar to reconsider its decision and renews its call for Daw Aung San Suu Kyi’s immediate and unconditional release.
This new ruling places doubt on the commitment of the Government of Myanmar to hold free, fair, participatory, transparent, and credible elections in 2010.
This development isastep backward and has once again sidetracked Myanmar’s efforts to carry out its own “Roadmap for Democracy”: its avowed program of releasing political detainees, including unfettering the National League for Democracy, and allowing its unconditional participation in free elections.
The Philippines echoes the statements made by United Nations Secretary General Ban Ki-Moon that there can be no way forward in Myanmar’s quest for political, economic and social progress without respect for human rights and fundamental freedoms.
The Philippines hasadeep friendship with the people of Myanmar, and as conveyed earlier by President Gloria Macapagal Arroyo to Prime Minister Thein Sein, has only their welfare at heart.
World leaders condemn Suu Kyi term
News - World Source > Aljazeera Tuesday, 11 August 2009
Leaders and protesters from around the world have condemned the verdict against Aung San Suu Kyi, Myanmar's pro-democracy opposition leader.
Ban Ki-moon, the UN secretary-general, said he "strongly deplored" the decision to keep Suu Kyi under house arrest for another 18 months, and called for her immediate release.
The European Union has vowed to bring new sanctions against Myanmar following Tuesday's verdict, saying it would "respond with additional targeted measures against those responsible for the verdict".
"In addition, the EU will further reinforce its restrictive measures targeting the regime of Burma/Myanmar, including its economic interests," the Swedish EU presidency said inastatement.
India says Myanmar must expedite political reform
News - Regional Source > Reuters India Tuesday, 11 August 2009
MUMBAI (Reuters) - India called for political reforms in army-ruled Myanmar on Tuesday afteracourt sentenced opposition leader Aung San Suu Kyi to 18 months in detention,averdict that has drawn widespread condemnation.
India is one of the few countries that has trade ties with Myanmar, helping provide the ruling junta with an economic lifeline, alongwith China and Thailand.
The Indian Foreign Ministry said inastatement it had seen reports of the sentencing of Suu Kyi after an American man breached the terms of her house arrest by swimming uninvited to her lakeside home in May.
"India has emphasised to the Government of Myanmar the need to expedite their political reform and national reconciliation process, and have noted the various steps taken so far," the Foreign Ministry said.
"We have maintained that this process should be broad based, including the various ethnic groups. In this context, the issue of release of political prisoners will no doubt receive due attention," the note said.
India, analysts say, is followingapolicy of engagement with Myanmar, partly driven by concern over the neighbour's ties with China.
“ဒီနေ့က တော်တော်ကို များတယ်။ လူတော်တော်စုံပြီးတော့ များတယ်။ ခန့်မှန်းခြေက ထောင်ကျော်မယ်။ ဟိုဘက်ကုန်းထိပ်ဘက်မှာရော၊ ဒီဘက်မှာလည်းဆိုတော့ ထောင်ကျော်ကတော့ သေချာတယ်” ဟု အန်အယ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းတင်၊ အန်အယ်ဒီ ခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
BY မလေးမေ ... 8/11/20090comment
၀၉.၀၈.၂၀၀၉ နေ့ က (နဂိုယာ) ဂျပန် ၌ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး ...
လှုပ်ရှားသူများမှ ဦးစီး၍ အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ကြ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် (၂၁) ကြိမ်မြောက်(၈၈၈၈) နှစ်ပါတ်လည် ချီတက်ဆန္နပြပွဲအား....
အင်အား ၁၀၀ ခန့် တက်ရောက်ပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့ကြပြီး (ABSDF) မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၁)
ကိုဆလိုင်းယောအောင် နှင့် (နဂိုယာ) ဂျပန် မှ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတို့ 
လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေး တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲအား အောင်မြင်စွာကျင်းပ ခဲ့ကြသည်...။ ။
11.8.09 ဦးဥာဏ်ဝင်း (NLD )ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုအေ...
Please come for demonstration in front of U.N., Ne...